Indawo yokuhlambela eDworek Tykocin
* IINDWELE EZIBHEKE IVEKI YOKUHLALA OKANYE YONKE I-TYKOCIN MANOR!
"Wamkelekile kwi-BACKFAST BASKET"
Sonke siyazi ukuba akukho nto ingcono kunesidlo sakusasa esimnandi. Sinikezela ukuba ulungiselele ibhasikidi yesidlo sakusasa kunye nentsha, emnandi kwaye, ngaphezu kwayo yonke, iimveliso zendalo zengingqi. Akukho sizathu sokukhangela isonka kwiimarike okanye inyama kwi-foil - zonke izinto zayo zilungiswa ngababhaki bendawo, ababheki kunye nabenzi beeshizi.
Yintoni ekwingobozi yakusasa?
- amanxeba abandayo
- iitshizi zebhokhwe
- esitsha, isonka esiqholiweyo
- itshizi eyosiweyo
-... kwaye "into encinci" yesiqalo esihle sosuku.